Hagaha turubka ugu fiican iyo xeeladaha - Gambling Papa
1 Waa maxay turubka?
1.1 Noocyo dhowr ah oo kala duwan oo kaararka ciyaarta ah
1.2 Taariikhda turubka
2 Sidee loo ciyaaraa turubka?
2.1 Xeerarka ciyaarta
3 Waa maxay jaantusyada istiraatiijiyadda turubka?
4 Tilmaamaha turubka ee bilowga
5 Xeeladaha khamaarka khamaarka
6 Sida loogu guuleysto turubka?
7 Tilmaamaha iyo tabaha khamaarka
Ugu dambeyntiina, turubku waa kaarka ugu caansan ciyaarta kaararka badankood. In kasta oo ay ka mid tahay ciyaarihii ugu cusbaa ee la ikhtiraaco, haddana wali waxay ku leedahay joogitaan ballaadhan masraxa adduunka.
Haddii aad dhab ka tahay inaad ka dhigto wax weyn fagaaraha turubka, markaa waa inaad wax badan barataa ka hor intaadan fadhiisan si aad u ciyaarto.
Haddii kale, tartamayaashaadu waxay tirtiri doonaan sagxadda dhulka iyadoo ay ugu wacan tahay dhaqdhaqaaqyadaada aan la ogeyn. Nasiib wanaag, ninkaan, waxaad ka badnaan doontaa diyaar garow kasta oo aad la kulanto. Habkaas, waxaad noqon doontaa midka guriga ugu lugeeya abaalmarinta dhamaadka maalinta. Si kale haddii loo dhigo, waxaad noqon doontaa guuleystaha xiga ee xukunka haya.
Baro aasaaska: Qof walba waa inuu ka bilaabaa meel. Xaaladaha badankood, way kafiican tahay inaad barato aasaasiga kahor intaadan iskudayin oo aad kusii ballaarin fikradahaas. Haddii kale, way kugu adkaan doontaa inaad sii wado adigoon luminaynin fikirkaaga.
Fahmaan dulqaadka halista: Ciyaartoyda turubka halyeeyga ah way ogyihiin in marka aad ciyaar sameyneyso aad aqbasho heer qatar ah. Ciyaar walba ma aha inay qatar badan leedahay. Si kastaba ha noqotee, khatar la’aan, waligaa wax weyn kama dhigi doontid. Marka, xirfad run ah waxay ku dhex jirtaa kuwa dhexdhexaad ka ah habka dulqaadka.
Ku gal himilooyinka saxda ah: Dabcan, way fududahay in la sawiro muuqaal weyn oo ah sida aad u guuleysan doontid ka dib markii aad fadhiisatay miiska markii ugu horreysay. In kasta oo dabeecadda soo jiidashada leh ee riyadan, waxaa fiican in la dejiyo rajooyin macquul ah oo macquul ah. Haddii kale, waxaa laga yaabaa in laguu daayo wax badan oo ka badan inta aad jeclaan lahayd.
Waa maxay turubka?
Bilaabidda, waa inaan caddeynnaa waxa aan uga jeedno ereyga poker. Maaddaama ay caan ku tahay adduunka oo dhan, waxaa jira qiyaastii hal milyan oo noocyo kala duwan oo kaararka ciyaarta ah. Ku dhowaad dhammaantood waxay wadaagaan astaamo gaar ah. Weli, markaad miiska fadhiisato, xitaa farqi yar ayaa noqon kara ciyaar bedel. Sidaa darteed, ogaanshaha noocyada lagu ciyaaro miiskaaga waa aqoon muhiim ah.
Noocyo dhowr ah oo kala duwan oo kaararka ciyaarta ah
Sanadihii la soo dhaafay, qaabab badan oo dheeri ah ayaa loo soo bandhigay ciyaarta. Maanta, illaa hadda, kuwa ugu caansan waxay noqon lahaayeen Texas Hold’em. In kasta oo aan lagu abuurin Texas, haddana waxay hubaal ka dhigeysaa dhaxalkeeda gobolkaas. Ilaa iyo markii ugu horeysay ee la soo bandhigo tartamada caanka ah ee turubka, wax isku mid ah ma noqonin.
Caadi ahaan waxaa lagu ciyaaray casinos:
Maalmahan, dadku waxay aadaan khamaarka xaafadooda si ay ugu ciyaaraan gacan dhaqso badan inta badan. Ka sokow, markaad khadka tooska ah ku ciyaareyso, wax badan ayaa ka adag inaad been abuur ku sameyso kuwa kaa soo horjeeda. In kasta oo, ciyaarta tooska ahi ay maamusho in ay dad badan u sahlanaato
Caadi ahaan waxay ku lug leedahay gelinta sharad:
Sida khamaarka kale ama khamaarka khadka tooska ah lagu ciyaaro ee loo yaqaan casino, waxaad u dhigaysaa taas haddii aad go’aansato inaad ku biirto. Xeerarku way kala duwanaan doonaan iyadoo kuxiran nooca ciyaarta loo isticmaalo. Inta badan, ugu yaraan mid ka mid ah ciyaartoyda ayaa lagu qasbay inuu meel dhigto bilowga wareeg kasta. Xaaladaha qaarkood, in ka badan hal ciyaartoy waa inuu ciyaaro sharad noocaas ah. Way fiicnaan lahayd inaad kala caddeyso ganacsadaha intaadan fadhiisan xeerarka la raacayo.
In kasta oo ay ka mid tahay kaararka ugu caansan ee la yaqaan, haddana qof walba ma garanayo taariikhda turubka illaa xadka ugu buuxda. Waxay umuuqataa inay dadku kuqanacsanyihiin fikirka casriga ah ee ciyaarta. Si kastaba ha noqotee, annaga, waxaa jira sixir badan oo ka mid ah keydadka khasnadaha ee waqtiga ka hadhay taariikhda ciyaarta.
Waxaa lasoo saaray horraantii qarnigii 19-aad:
Asalka saxda ah ee ciyaarta looma yaqaan si sax ah. Si kastaba ha noqotee, horaantii qarnigii 19-aad, waxaa lagu ciyaaray dhamaan baaxada balaaran ee qaarada Mareykanka. Tan iyo wakhtigaas, caanku wuxuu sii waday oo keliya inuu kordho sanad walba.
Sidee loo ciyaaraa turubka?
Dabcan, waxaan ku xiri karnaa hadal ku saabsan falsafadda ciyaarta si aan dhammaad lahayn. Si kastaba ha noqotee, haddii aan raaci lahayn dariiq noocan oo kale ah, markaa sidee u baran laheyd sida loo ciyaaro ciyaarta? Sidaa darteed, waxaan u heli doonnaa si sax ah ubucda arrinta. Hoos waxaad kaheleysaa hage loo soo gaabiyey ciyaarta. Sidii aan horey u soo sheegnay, waxaa jira noocyo badan oo turub ah. Sidaa darteed, waa inaad u isticmaashaa sharciyada soo socda sida sawir gacmeed. Xaaladaha qaarkood, sharciyadan ayaa laga yaabaa inaysan khuseyn ciyaarta laga hadlayo. Si kastaba ha noqotee, waa inay u adeegaan sidii hordhac guud oo weyn.
Ganacsadaha ayaa kaararka kala wareegaya markasta: Dhamaan ciyaaraha casino, ganacsadaha ayaa maamuli doona kaararka inta lagu jiro wareeg kasta. Haddii ay dhacdo inaad ku ciyaarto ciyaarta guriga, markaa dadku waxay u muuqdaan inay wareegaan cidda ku ciyaareysa ganacsadaha ka dib markasta. Sidaa darteed, waxay kuxirantahay meesha aad ku ciyaareyso, talaabadani waxay u muuqan kartaa wax yar. Si kastaba ha noqotee, inta soo hartay waa inay noqdaan kuwa isku dhow.
Amarka khamaarista ayaa wareegaya ciyaarta oo dhan: Inta badan, dad yar uun baa qasab ku dhigaya dhigeeda wareeg kasta. Dadka ay qasab tahay inay khamaariyaan waxay kala duwanaan doonaan ka dib gacan kasta oo buuxda. Ciyaaraha badankood, mid ka mid ah dadka waa inuu dhigaa sariir ka weyn tan kale.
Kaararka waxaa loola dhaqmayaa dhinaca saacadda: Kaddib meelayntaas, kaararka ayaa lagula macaamilayaa ciyaartoy kasta. Badanaa, kaararka waxaa loo dhiibi doonaa ciyaartoyda midba mar iyadoo foorara. Ka dib marka ciyaaryahan kasta uu helo kaar, ganacsadaha ayaa u dhiibi doona mid labaad oo ay ku raacaan.
Ciyaartoyda qaar ayaa lagu qasbay inay sharad galaan: Kaararka oo dhan kadib markii la qabtay, dadku waxay helayaan fursad ay ku sharad dhigaan. Mararka qaarkood, waa lagugu qasbi doonaa inaad sharad gasho. Haddii aad go’aansato inaadan jeclaan lahayn inaad mid dhigato, waa inaad gacantaada buuxisaa. Sidaas darteed, adiga oo kaa baabi’inaya wareeggaas ciyaarta.
Wareegga xiga, kaarar badan ayaa la dul saari doonaa miiska: Kaararka waxaa la dhigi doonaa bartamaha miiska ka dib markii qof walba uu gacantiisa helay. Kaararkaani waxay go’aaminayaan sida qiimaha leh ee gacantaadu noqon doonto dhamaadka. Ka dib marka sharad la dhigo, kaararka dheeraadka ah waxaa la dhigayaa miiska sidoo kale.
Waqtigan xaadirka ah, dadku waxay dhigi karaan sariiro dheeraad ah ama laablaab: Waad go’aansan kartaa haddii aad jeclaan lahayd inaad ku sii wado gacanta. Haddii aad aaminsan tahay inay jirto fursad wanaagsan oo aad ku guuleysan karto, markaa xitaa waad kordhin kartaa cabbirka sharadkaaga. Sidaa darteed, ku qasbida ciyaartoy kale inay u dhigmaan sharadkaaga ama ay gacanta ku dhacaan. Si kastaba ha noqotee, waad tirtiri doontaa tartanka ama waxaad kordhin doontaa barkadaha guuleysta.
Wareeg kale oo kaararka wax ka qabashada ayaa dhacaya: Ugu dambeynti, kaararka ugu dambeeya waxaa la dul saari doonaa miiska si ay dhammaan u wada arkaan. Waxay kuxirantahay kala duwanaanta, waxaad heli kartaa fursad kama dambeys ah oo aad ku dhejiso sharad. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha oo dhan, waxaad gacmahaaga saari doontaa miiska oo aad isbarbar dhigi doontaa ciyaartoyda kale.
Ugu dambeyntiina, ciyaartoydu waxay muujinayaan kaararkooda oo cidda ku guuleysata ayaa la go’aamiyaa:
Iyada oo ku xidhan kaararka gacantaada ku jira, waxaad kasban doontaa tiro cayiman oo dhibco ah sida ku cad kuwa miiska saaran. Haddii aad maamusho inaad ka badiso kuwa kaa soo horjeeda, markaa waxaad ku soo ururin doontaa abaalmarinta oo dhan dhexda. Si kastaba ha noqotee, haddii aad xirxirto qofka kaa soo horjeeda, waa inaad u kala qaybisaa Ghanna.
Waa maxay jaantusyada istiraatiijiyadda turubka?
Waxay u muuqan kartaa sidii haddii turubku yahay ciyaar dhib yar. Xaqiiqdii, waxaa jira wax ka badan uun istiraatiijiyad yar oo ku lug leh. Ciyaartoyda qibrada leh waxay u muuqdaan inay sanado badan ku qarashgareeyaan xirfadooda illaa ay diyaar u yihiin inay galaan faa’iidooyinka. Si kastaba ha noqotee, in badan oo ka mid ah xeeladahaas isku mid ah waxaa u adeegsan kara isticmaaleyaal khibrad la’aan khibrad la’aan halgan la’aan badan. Adoo adeegsanaya mid ka mid ah jaantusyada istiraatiijiga ah ee soo socda, waxaad ka takhalusi doontaa mala-awaalka ciyaartaada. Habkaas, waxaad wici kartaa wicitaan kasta kalsooni buuxda. Waxaa intaa dheer, waxay u egtahay inay jahwareeriso kuwa kaa soo horjeeda sidoo kale. Markaad tusto kartida noocaas ah, waxaad ku soo saari doontaa aura awood leh aagga.
Marka hore, jaantuskani waa mid toos u toosan. Waxay si fudud u liis garaysaa waxa gacan kasta qiimihiisu noqon karo kiisaska oo dhan. Habkaas, waxaad si dhakhso leh u go’aamin kartaa sida ay kuugu habboon tahay inaad ku guuleysato gacanta oo ku saleysan kaararka oo aad ciyaareyso. Dhab ahaan, waxaad yareyn doontaa waqtiga ay kugu qaadato inaad go’aan ku gaarto. Haddii kale, waa inaad halkaas fadhiisato oo aad ka fikirto dhaqdhaqaaq kasta oo aan dhammaad lahayn.
Gacmaha bilowga ah:
Kani waa jaantus kale oo fudud oo u muuqda inuu caan ku yahay bilowga. Midkood, waxaad si dhakhso leh u go’aamin kartaa sida ay awooddaada bilowga ahi u tahay bilowga wareeggaaga. Haddii aad ogaato in arrimuhu aysan u muuqan wax wanaagsan, markaa waad khalad kartaa kaararkaaga ka hor intaadan maal gashan. Haddii kale, way fududahay inaad la joogto muddo aad uga dheer intii lagaa rabay.
Dhibaatooyinka jaantusyada guuleysta:
Ugu dambeyntiina, tani waxay noqon doontaa shaxda ugu murugsan bilowgayaasha inay bartaan. Maaddaama ay macluumaad badan ku jiraan, waxaan isku dayi doonnaa soo koobitaan kooban. Markaad fiiriso jaantuska, waxaad arki doontaa waxa boqolkiiba fursad u ah dalool kasta inuu soo muuqdo inta lagu jiro ciyaarta. Markaad aragto wax aan caadi ahayn, waxaad u adeegsan kartaa jaantuska si aad u go’aamiso waxa ku habboon ee tallaabada ay u noqon laheyd xaaladahaas. Sidaa darteed, haddii aad si fiican u barato, waxay ka mid tahay aaladaha ugu waxtar badan ee loo heli karo ciyaartoyda turubka
Tilmaamaha turubka ee bilowga
Ku ciyaarista turubka ma ahan wax adag sida dadka badankood ay u baahdaan inay aaminaan. Xaqiiqdii, waqti dheer kuma qaadanayso laylis si ay u xakameeyaan aasaasiga. Intaa ka dib, waxay bilaabi karaan inay diiradda saaraan xoogaa ka mid ah mowduucyada aadka u murugsan si kor loogu qaado istiraatiijiyadooda. Adoo ku beeraya cibaado faneed farsamada gacanta, waxaad ku soo bixi doontaa guul inta badan maya. Si ka duwan sidii hore loo dhigo, waxaad noqon kartaa boqorka miiska inta aad shaqada gelineyso.
Bluffs waa ilahaaga ugu awooda badan:
Waxaa laga yaabaa, fikradda ugu khaldan ee la fahmi karo ee turubka inay noqon doonto mid buluug ah. In kasta oo badankood u muuqdaan inay u arkaan calaamadda bilowga ah, haddana way ka waxtar badan tahay sida ay u maleeyaan. Lahaanshaha wax ku oolka ah, waxaad ubadali kartaa gacan lumis ah ciyaar guul isla markaaba. Dabcan, maadaama ay tahay farsamo noocan oo kale ah, maahan wax dadka intiisa badani habeen dhaweyd qabsadaan.
Waad ku guuleysan kartaa gacan inkasta oo kaararku lumi lahaa:
Aynu nidhaahno waxaad dhigtay miis aad u qurux badan. Si kastaba ha noqotee, adhiga ka dib, waxaad moodaa in qilaafku kaa soo horjeeday. Muxuu sameyn lahaa ciyaaryahan xirfadle ah haddii ay isku arkaan duruufahaas oo kale? Hagaag, aragtideena, xalka wuxuu umuuqdaa mid iska cad. Intii aad lumin lahayd sharadyada aad horay u dhigtay, iskuday inaad maskax ka baxdo qofka kaa soo hor jeeda si ay u lumiyaan ciyaarta. Haddii aad guuleysato, waxaad ku guuleysan doontaa gacanta iyo bakhaarka. Waxaa intaa dheer, waad sameyn kartaa tan oo dhan adigoon haysan labo kaar oo guuleysan lahaa.
Ogaanshaha goorta la laalaabayo si siman ayey muhiim u tahay:
Mararka qaarkood, isku dayga inaad ku dhegto ciyaarta waa istiraatiijiyad lumis ah dhinaca kale. In kasta oo xirfadlayaal badani ay u janjeeraan waddadooda guusha, haddana waxay sidoo kale ku guuleysteen inay isku laabmaan gacmo badan intaaney sharad gelin. Waa isku dheelitirnaanta gardarrada iyo difaaca oo runtii qeexaya ciyaar karti leh.
Ugu dambayntii, turubku waa tartan ku saabsan awood darri:
Maaddaama aad la ciyaari doontid kuwa kale ee aadanaha ka soo horjeedda, waxay u egtahay in lagu wareejiyo ciyaar xoog ah dhammaadka. Ilaa intaad ilaalinaysid xakamaynta maskaxdaada, waxaad u badan tahay inaad ka soo baxdo hawlgelinta sidii horyaal. Hadday taasi kuu muuqanayso adiga, markaa waxaan kugu dhiirrigelinaynaa inaad kobciso awooddaada maskaxeed sida ugu dhakhsaha badan. Inta aad ciyaarta ka go’an tahay, waxaad ka faa’iideysan doontaa maskax-wanaag maskaxeed.
Xeeladaha khamaarka khamaarka
Istaraatiijiyad u dhigista sharadkaaga ayaa wax ka beddeli karta fursadaha soo if baxa ee guuleysta Kaba soo qaad inaad habeen dhan ku soo qaadatay habeen adag. Waqtigan xaadirka ah, dadku waxay leeyihiin laba wadiiqo oo soo food saarta.
Istaraatijiyadaha muxaafidka ah ee lagu ilaalinayo joogitaanka ciyaarta:
Dhinac, waxaad isku dayi laheyd inaad ciyaarta ku sii jirtid ilaa iyo inta suurtogalka ah. Caadi ahaan, waxaad isku dayi doontaa inaad xaddido cabbirka sharadyada aad dhigato. Waxaa intaa dheer, waad iska ilaalin doontaa inaad dhigto khamaarista markasta oo ay suurtagal tahay. Qaabkaas, waad u ciyaari kartaa muddo dheer adigoon u baahnayn inaad naftaada u bareerto halista ugu badan. Istaraatiijiyadda noocan ah, turubku si dhakhso ah ayuu u noqdaa ciyaar isdaba joog ah.
Khamaarista gardarrada ah ee la dhigay xilligii saxda ahaa si loo xaqiijiyo guul:
Hadda, dhinaca kale, waxaad qaadan kartaa qaab ka soo horjeedka dhabta ah. Halkii aad isku dayi lahayd inaad joogsato wakhti, waxaad u ordi doontaa dhiig bilowga wareeg kasta. Adiga oo miiska saaraya sharad aad u tiro badan, waxaad ku qasbi doontaa kuwa kaa soo horjeeda inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo go’aan qaadasho leh. Ilaa iyo inta ay gacmuhu ku socdaan wanaaggaaga, waxaad ku baabi’in kartaa qof kasta oo kale xawaare la yaab leh.
Qaabab isku dheelitiran oo u baahan xoogaa yar uun:
Dabcan, sayidyahanada runta ah ee farshaxanka waxay fahansanyihiin inay jiraan waxbadan oo ciyaartan ah marka loo eego kala soocida madow iyo cadaan. Xaqiiqdii, ciyaartooyda turubka ugu guuleysiga badan ayaa isdhaafsada labada istiraatiijiyad ee hore. Xaaladaha qaarkood, waxay u noqon doonaan kuwo dagaal badan sida dadka kale. Si kastaba ha noqotee, markii waqtigu sax yahay, waxay u gudbaan istiraatiijiyad ficil muxaafid ah. Marka, waxay ka faa’iideystaan ​​faa’iidadooda markay awood leedahay. Kadib, waxay yareeyaan khatartooda soo-gaadhista ka dib markay mawjaddu rogto
Sida loogu guuleysto turubka?
Inaad ku guuleysato turubku way ka fududdahay sida ay ula tahay ciyaaro badan oo kale casino. Maaddaama inta badan ciyaaraha casino ay ku tiirsan yihiin fursad, wax yar oo aad sameyn kartid ayaa lagu horumarin karaa dhibaatooyinkaaga. Kaadi ahaan, dhanka kale, waxyaabo badan ayaa ka duwan. Markaad barato xeelado wax ku ool ah, waxaad ku badin doontaa fursaddaada miiska. Sidaa darteed, waxay u egtahay inay aad ugu dhowdahay inaad udhaqaaqdo sidii guuleyste mar alla markii wax walba la yiraahdo oo la qabto.
Kordhinta kuwa kaa soo horjeeda:
Marka laga eego aragtideena, ku sii nagaanshaha ciyaarta waqti ka dheer kuwa kaa soo horjeedaa waa hadafka ugu aasaasiga ah marka aad ciyaarayso turubka. Ku alla kii hadhay oo taagan, aakhirka, wuxuu noqon doonaa kan sheegta abaalmarinta. Sidaa darteed, waxaad noqon kartaa guuleystaha ugu dambeeya adigoon gacmo badan ku guuleysan. Haddii aad ku guuleysato inaad ku guuleysato guulo go’aan ah, weli waxaad ku qasbi doontaa kuwa kaa soo horjeeda inay oggolaadaan cinwaanka.
Isha ku hay abaalmarinta:
Sida takhasusyada kale oo kale, diiradu waxay ka mid tahay astaamaha ugu muhiimsan ee aad ku horumarin karto haddii aad ku hammi weyneyso weynaan. Adoo diiradda saaraya hawsha gacanta ku haysa, waad tirtiri doontaa khaladaadka sida kale u muuqan lahaa. Xaaladaha badankood, maahan in dadku ku guuldareystaan ​​inay aqoonsadaan fursad. Dhab ahaantii, waa wax fudud inaysan arkin markii ay muuqatay. Way fududahay inaad iska indhatirto fursad markii lagu mashquuliyo. Sidaa darteed, in maskaxda lagu hayo waxay noqoneysaa awood titanic ah marka ciyaarta la ciyaarayo.
U oggolaanshaha daqiiqado shucuur ah inay dhaafaan adigoon saameyn ku yeelan go’aamadaada:
Ka dib markaad ku guuleysato gacantaada weyn ee ugu horreysa, waxaad dareemi doontaa xamaasad deg deg ah oo aad u xoog badan oo laga yaabo inay kugu adkaato. Xaalado badan, kuwa bilowga ahi waxay u oggolaan doonaan dareenkaas inay xukumaan dareenkooda. Kadib, waxay bilaabaan inay sameeyaan khaladaad taxaddar la’aan ah oo ku qasbaya inay difaac galaan. Dareen qiiro leh, bilowyadan waxay bilaabayaan inay ku wareegaan meertada is-jabinta.
Adiga oo maareynaya shucuurtaada, waxaad ka fogaan doontaa inaad ku dhacdo ugaarsi lamid ah kuwa ka imaaday tusaalaha kore.
Fahmitaanka waxa ay ciyaartu taagan tahay xilligan:
Ugudambeyn, turubku wuxuu ku dulwareegayaa itimaalka tirakoobka. Adiga oo xafidaya waxa ay gacan walboo ku dhacdo, waxaad ku hubaysan doontaa aqoonta ugu qiimaha badan ee suurtogalka ah. Maaddaama aad fahmi doontid tiirarka ciyaar kasta, waxba kaa xigi maayaan adiga oo ku dhex jira daruuraha jahwareerka. Taabadalkeed, waxaad kusii kordhineysaa dembi wax ku ool ah kuwa kaa soo horjeeda maadaama ay ka fiirsanayaan waxa soo socda
Kahor intaanan ambabixin, waxaan jeclaan lahayn inaan kaaga tagno xoogaa talo oo talo ah. Iyaga oo la socda, waxaad marin u heli doontaa macluumaad aad u xiiso badan.
Ugu dambeyntiina, marka laga eego aragtideena, kuwani waa waxyaabaha u muuqda inay ka soocaan kuwa bilowga ah iyo kuwa runti hibo u leh. Inta badan, maahan inaadan karti u lahaan karin xirfadle ahaan.
Waa wax fudud in xirfadlayaashu ay faham qoto dheer ka leeyihiin maadada. Maaddaama kobcinta fahamku aysan ahayn geeddi-socod habeennimo, waxaa fiicnaan lahayd haddii aad bilowdo sida ugu dhakhsaha badan. Haddii kale, waxaad ku dhegi doontaa isku dayga inaad soo qabato xitaa haddii kuwa kale ay u gudbayaan heerka ku xiga.
Si fiican u baro socodka ciyaarta:
Marka ugu horeysa, isbarashada waa wax qof kastaa qadarin karo markuu ku dhex jiro waxyaalaha adag. Waa inta lagu jiro daqiiqadahaas shucuurtu waxay u muuqdaan inay noqdaan kuwa ugu awoodda badan. Dareenka aqoonta ayaa hub ka dhigis ku noqon kara xaalad kale oo khiyaano leh. Markaa, waxaad ka heli doontaa marin habeynta biyaha deggan ma aha caqabad noocan oo kale ah. Markaad tahay qofka istaaga xasilloonida duufaanka, waxaa lagugu siinayaa qaab awood badan oo aad ku xakameyso dadka tirada badan ee kugu hareeraysan. Awooddaas, waxaad awoodi doontaa inaad ku horumariso xakamaynta farsamada soo socota.
Baro sida cilmi nafsi ahaan loogu saameeyo kuwa kaa soo horjeeda:
Ka soo qaad inaad miiska fadhiisatay dhowr saacadood markan. Hadda, waxaad bilaabeysaa inaad la yaabto sida wax u dhammaan doonaan. Dhinaca kale, waxay u muuqataa in adiga iyo kan kaa soo horjeedaa aad ku jirtaan dhammaadka xargahaaga. Weli, uma muuqato inuu goor dhow dib uga laaban doono. Maxaad sameyn laheyd haddii aad isku aragtid kabahaas? Anaga ahaan, habka ugu cad ee ficilku wuxuu noqon lahaa inaan galno madaxa qofka naga soo horjeeda. Habkaas, waxaan bilaabi karnaa inaan kala qaadno ficilladooda si aan uga sii dhigno hubka. Ugu dambeyntiina, haddii aan maskaxda ka saari karno, waxaan ku qasbi karnaa inay qalad sameeyaan. Markaa, la qaadashada bakhaarka ayaa noqonaysa wax aan fududayn.
Hagaaji edbintaada, markaa waligaa qalad ma sameyn doontid:
Ugu dambeyntiina, waxaan soo jeedineynaa in lagu dhaqmo edbinta dhammaan qaybaha nolosha. Sidaad hal shay u sameyso waxay noqon doontaa sida aad wax walba u qabato dhamaadka. Ku noolaanshaha edbinta, ku ciyaarida edbinta waxay noqon doontaa dabeecadda labaad.